तास खेल्दा ३६ लाख रुपैयाँ हारेपछि अमेरिका जान बाध्य भए : नायक रमेश उप्रेती (भिडियो) - Medianp
तास खेल्दा ३६ लाख रुपैयाँ हारेपछि अमेरिका जान बाध्य भए : नायक रमेश उप्रेती (भिडियो)
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २७, २०७४१७:१७0
अनिल पंगेनी /काठमाडौँ २७ असोज । आउदो कार्तिक ९ गते प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘ऐश्वर्य’ को टिम अहिले प्रचारप्रसारमा निकै व्यस्त छ । चलचित्र प्रमोसनको सुरुवात देखिनै नायिका केकी अधिकारी प्रमोसनमा अटाइएकि थिइनन् ।
केकी दोश्रो पोस्टर सार्बजनिक भएदेखि भने प्रमोसनको विभिन्न कार्यक्रममा देखिन थालेकी छन् । यसै दौरानमा मिडिया एन. पीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा नायक रमेश उप्रेती र नायिका केकी अधिकारीले चलचित्र ‘ऐश्वर्य’को सुटिंग अनुभवको साथै आफ्नो जिन्दगीका केहि मिठा त केहि तिता अनुभब साटेका थिए ।
तिहार लगतै प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ऐश्वर्य’ लाई जोडेर रमेश र केकी दुबैलाई एक प्रश्न गरिएको थियो । तिहारमा कत्तिको तास खेल्नु हुन्थ्यो र कति सम्म हार-जित को अनुभब छ ? केकी को जवाफ निकै सामान्य किसिमकै थियो, अहिले सम्म धेरैमा ६ हजार जति जितेकी छु ।
तेसपछी माईक रमेश उप्रेती तर्फ तेस्रियो .. रमेश उप्रेतीले केहि मलिन त केहि फिक्का मुस्कान सहित पुराना दिन सम्झदै भने– “आज भन्दा करिब १०-१२ बर्ष अघि म निकै जुवाडे थिए । तास टाइम पासको लागि खेल्ने चलन म मा कहिल्यै भएन.. कि मलाई जित्नु पर्थ्यो कि हार्नु पर्थ्यो..एकदिन तास खेल्दै जादाँ यति सम्म खेलेको छु कि ३६ लाख रुपैया हारियो ।
त्यो हारले उनमा निकै ठुलो असर र प्रभाब परेछ कि उनि अझ खुलाउँदै भन्छन् “म अमेरिका जानुको, यो पनी एक कारण हो ।